Public Health in Myanmar: November 2008
ကျန်းမာစွာ အသက်ရှင် ရပ်တည်ရန် နေ့စဉ် စားသုံးရန်လိုအပ်သော အစာပမာဏ
ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ်များသည် သီးခြား တည်ရှိနေခြင်း မဟုတ်ပဲ Macronutrients များထဲတွင် ပါဝင် နေသောကြောင့် အာဟာရ အကြီးစားများကို နေ့စဉ် စားသုံးသင့်သည့် ပမာဏအတိုင်း လုံလောက် မျှတစွာ စားသုံးပါက လိုအပ်သော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ် များကို မချို့တဲ့အောင် ကာကွယ် ပြီးသား ဖြစ်သလို တခြား ရောဂါပေါင်းများစွာကိုလည်း ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ် စားသုံး သင့်သည့် ပမာဏ အတွက် Australian Guideline for Healthy Diet တွင် အကြံပြု ထားသည့်အတိုင်း ကောက်နှုတ် တင်ပြ လိုက် ပါသည်။ ထို အကြံပြုချက် ထဲတွင် အရည်ဖြစ်စေ၊ အဖတ်ဖြစ်စေ တခွက်စာ ဆိုသည်မှာ အရည် ၂၅၀ မီလီလီတာ ၀င်သည့် ခွက် (သို့) ပန်းကန်လုံး တလုံးစာကို ဆိုလိုပါသည်။ နေ့စဉ် စားသုံး သင့်သည့် အစားအစာ များကို အောက်ပါအတိုင်း အုပ်စုကြီးငါးခု ခွဲထားပါသည်။
၁။ ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ် (ကစီဓါတ် များသော) နှံစား သီးနှံများ
ထမင်း၊ ပေါင်မုန့်၊ cereals, Pasta, ခေါက်ဆွဲ စသည် ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း တို့ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသော အစားအစာ အကုန်လုံးပါဝင်ပြီး စားသုံး သင့်သည့် ပမာဏကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ပြီး ငါးကြိမ် အထိ စားသုံး သင့်သည် ဟု စံ သတ်မှတ် ထားပါသည်။
- ပေါင်မုန့် အချပ်ဖြစ်ပါက နှစ်ချပ်
- ပေါင်မုန့်အလုံးဖြစ်ပါက အနေတော်အရွယ် တလုံး
- ခေါက်ခွဲ၊ Pasta, cereal နှင့် ထမင်း ဖြစ်ပါက ပန်းကန်လုံးတလုံးစာ ( ယောင်းမ (သို) ထမင်းခူးဇွန်း အနေ တော်အရွယ်နှင့် တခပ်စာ) သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သို့သော်လည်း ထမင်းကို အဓိကစားသော မြန်မာ လူမျိုးများအတွက်မူ ထမင်းကို ယောင်းမနှင့် တခပ်စာကို တခါစားအဖြစ် တင်းတိမ် နိုင်မည် မဟုတ် သဖြင့် ငါးခွက်စာကို မိမိ တနေ့စာ သတ်မှတ်ပြီး အကြိမ်ကို မိမိ ကြိုက်နှစ်သက် သလို သတ်မှတ် စားသုံး နိုင်ပါသည်။ အလုပ်ကြမ်း လုပ်သူမဟုတ်ပဲ ထိုထက် ပိုစားပါက အ၀လွန် ရောဂါရပြီး နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါများစွာ ရနိုင် ပါသည်။
၂။ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များ
ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များ ကိုလည်း စားသုံး သင့်သည့် ပမာဏကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ် ထားပါသည်။
- ဟင်းသီးဟင်းရွက် အစိမ်း (သို့) အကျက် ၇၅ ဂရမ် (သို့) တခွက်စာ
- ရောနှောထားစသည့် အသီးအရွက် ဖြစ်ပါက တခွက်စာ
- အာလူး (သို့) ခရမ်းချဉ်သီးကဲ့သို့ အစားအစာ ဖြစ်ပါက တလုံးခန့် စသည်ဖြင့် တခါစားကို သတ်မှတ်ထားပြီး တနေ့စာအတွက် ငါးကြိမ် စာခန့် စားသင့်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဟင်းသီးဟင်းရွက်သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အများဆုံး စားသင့် သောကြောင့် အစာအိမ်မှ လက်ခံ ပါက သတ်မှတ် ထားသည် ထက် ပိုစား၍ ပြဿနာ မရှိပါ။
၃။ အသီး နှံများ
အသီးနှံများကို အနည်းဆုံး တနေ့ နှစ်ကြိမ်ခန့်နှင့် တခါစားကို အောက်ပါ စံ သတ်မှတ် ထားသည့် ဥပမာ အတိုင်း စားသုံးသင့်ပါသည်။
- အနေတော်အရွယ် ပန်းသီး၊ ငှက်ပျောသီးနှင့် ကီဝီသီး စသည့် တလုံး
- အရည် ဖြစ်ပါက ခွက်တ၀က်
- စပျစ်သီး၊ စထရော် ဘယ်ရီကဲ့သို့ အသီးများနှင့် အသီးမျိုးမျိုးကို စိတ်ပြီး ရောနှောထားပါက တခွက်စာ
- အသီးခြောက်များ ဖြစ်ပါက ခွက်တ၀က်စာ နှင့် စည်သွပ် ထားသည့် အသီးဖြစ်ပါက တခွက်စာ ကို တခါစားအဖြစ် သတ်မှတ် စားသုံး သင့်ပါသည်။
အရည် ဆိုသည်မှာ ဆော်ဒါနှင့် သကြားပါဝင်သည့် Soft Drink ကို ဆိုလြိုခင်း မဟုတ်ပဲ ပန်းသီး (သို့) တခြားအသီးနှံများကို ရေအပါအ၀င် မည်သည့် အကူပစ္စည်းမှ မရောပဲ ၁၀၀% အရည် ညှစ်ထားသော သစ်သီးရည် ကိုသာ ဆိုလို ပါသည်။ အချိုဓါတ် နည်းသည့် အသီး ဖြစ်ပါက တနေ့ နှစ်ကြိမ် ထက် ပိုစား နိုင်ပါသည်။
၄။ နို့ထွက် ပစ္စည်းများ
နို့နှင့် နို့ထွက် အစားအစာ များကို တနေ့ နှစ်ကြိမ် မှ ငါးကြိမ် ခန့်အထိ စားသုံး သင့်ပြီး တခါစားကို အောက်ပါ ဥပမာအတိုင်း စံ သတ်မှတ် ထားပါသည်။
- ပဲနို့ (သို့) မလိုင်ဆယ်ပြီးသောနို့ (Skim milk) တခွက်စာ (၂၅၀ မီလီလီတာ)
- Cheese နှစ်လွှာ (သို့) ၄၀ ဂရမ်
- ဒိန်ချဉ် ၂၀၀ မီလီလီတာ
၅။ အသား၊ ငါး၊ ဥ၊ ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် အစေ့များ
အသားဓါတ်ကို အဓိက ပေးသော အစားအစာများ ဖြစ်ပြီး အသားဓါတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် ၇၀% ထုတ်လုပ်သောကြောင့် တနေ့ကို ၁-၂ ကြိမ်ခန့်သာ စားသုံးသင့်ပါသည်။ တခါစားရန် ပမာဏကို အောက်ပါအတိုင်း ဥပမာပေးပါသည်။
- ချက်ပြုတ်ထားသော အဆီနှင့် အရေပြားမပါသည့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသား သေးသေးနှစ်တုံး (သို့) ၆၅-၁၀၀ ဂရမ်ခန့် (စဉ်းထားသည့် အသား ဖြစ်ပါက ခွက်တ၀က်စာ)
- ကင်ထားသော အသားနှစ်လွှာ
- ငါးအသား ၈၀ - ၁၂၀ ဂရမ်
- ကြက်ဥ သေးသေး နှစ်လုံး
- မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာစေ့နှင့် တခြား အခံမာစေ့များ ခွက်တ၀က်ခန့်
- အပြုတ် (သို့) ကျက်ပြီးသော ပဲအမျိုးမျိုး တခွက်စာ စားသုံး သင့်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ် အနေဖြင့် အသက်ရှင်စဉ် ကာလ တွင် ကျန်းမာရေး သည် လူတယောက် အတွက် ပထမ အရေးကြီးဆုံး လိုအပ်ချက် ဖြစ်ပါ သည်။ လူတယောက် ကျန်းမာစွာ အသက်ရှင်ရပ် တည်ရန် အတွက် အဟာရသည် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ခြင်း သည် ကုသခြင်း ထက် ပိုမို ထိရောက်သည် ဟူသည့် စကားနှင့် အညီ အာဟာရကို လုံလောက် မျှတစွာ စားသုံးခြင်း ဖြင့် အာဟာရ ချို့တဲ့ခြင်းနှင့် လွန်ကဲခြင်း တို့ကို ရှောင်ကျဉ် နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကြောင့် ဖြစ်လာ နိုင်သည့် ရောဂါ ပေါင်း များစွာ ကိုလည်း ကာကွယ်သင့်ပါသည်။
Posted by Nge Naing 10 comments
Labels: Health behavior, Lifestyle, Nutrition အာဟာရ
ကျန်းမာစွာ အသက်ရှင်ရန် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အာဟာရ (၂)
Micronutrients များမှာ ဗီတာမင်များ နှင့် သတ္တုဓါတ်များ ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပြီး ၎င်းတို့ကို ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း ဇီဝကမ္မ လုပ်ငန်းများ ပုံမှန် လည်ပတ် နိုင်ရန်အတွက် အကူ အင်ဇိုင်း အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ချိန်ခွင်လျှာ ထိန်းညှိ ပေးသည့်အရာများ အဖြစ် လည်းကောင်း ခန္ဓာကိုယ် အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ Macronutrients ( အကြီးစား အာဟာရများ) အကြောင်း ကို ပထမပိုင်းတွင် တင်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်၍ ဤ ဒုတိယ ပိုင်းတွင် Micronutrients ( အသေးစား အဟာရများ) ၏ အလုပ် လုပ်ပုံနှင့် ရနိုင်သည့် အစားအစာ၊ စားသုံး သင့်သည့် ပမာဏနှင့် ချို့တဲ့ပါက ဖြစ်လာ နိုင်သည့် ပြဿနာများ ကို တင်ပြ လိုက်ပါသည်။
သွပ်ဓါတ်သည် အနာကျက် လွယ်စေခြင်း၊ အသားဓါတ် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဗီတာမင် A ရွှေ့လျားရာတွင် အကူအညီ ပေးခြင်း၊ ပုံမှန် အရေပြား လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် လိုအပ်သော အင်ဇိုင်းနှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း၊ အစားအစာ များ၏ အရသာနှင့် အနံ့ကို နဂို အတိုင်း ဖြစ်အောင် ထိန်းပေး ခြင်းနှင့် ခုခံအား လုပ်ဆောင်ချက် များအတွက် အကူအညီ ပေးသည်။ ချို့တဲ့မှု အဖြစ်နည်းပြီး ဖြစ်ပါက အရေပြား၊ အစာမြိုပြွန်၊ မျက်ကြည်လွှာ ရောဂါများ၊ ကလေးများ တွင် ကြီးထွားမှု နှေးကွေး စေခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ Zinc ဓါတ်အကြောင်းကို ပိုမို အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ကိုဝင်းဇော် စုစည်း တင်ပြထားသည့် ”လိုအပ်ချက် နည်းနည်းနှင့် ထိရောက်မှုများများ Zinc ဓါတ်” ကို http://winzaw-mdy.blogspot.com/2008/09/zinc.html တွင် သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by Nge Naing3comments
Labels: Lifestyle, Nutrition အာဟာရ, ဗီတာမင်များ
Posted by Dr. Win Thein6comments
HIV (Human Immunodeficiency Virus) ဆိုတာက လူ့ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကိုကျဆင်းစေ တဲ့ (Virus)ပိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ် ပိုးကခန္ဓာ ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်း အားစနစ်မှာ ပါတဲ့ Cells ဆဲလ် တွေကို သူရဲ့ (ဒီဗိုင်းရပ်စ် ပိုးရဲ့) ပုံစတူ ကိုယ်ပွား တွေ အဖြစ်လုပ် ပြစ်ပါတယ်။ ဒီလို နဲ့ဒီရောဂါပိုး ဟာ ခန္ဓာ ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံ စွမ်းအား စနစ် ကိုတဖြည်းဖြည်း နဲ့ အသေအချာ ကို ဖျက်ဆီး ပြစ်တော့ တာပါပဲ။
AIDS ဆိုတာ ဘာလဲ ?
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ခုခံအား ကျဆင်း မှုကူးစက်ရောဂါ ဆိုတာကတော့ HIV ပိုး ကူးစက်ခံ ရခြင်းကြောင့် ရရှိခံ စားလာရတဲ့ ရောဂါလက္ခ နာ အစုအပေါင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျန်း မာနေတဲ့ သူတွေမှာ မကူးစက် နိုင် တဲ့( ခန္ဓာ ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံ အားစနစ် နိမ့်ကျ မှသာ ကူးစက်နိုင်တဲ့ ) ကူးစက် ရောဂါ တွေ(opportunistic infections ) ၀င်ပြီး အသက် အန္တရာယ် ကို စိုးရိမ် ရတဲ့ ကူးစက်ရောဂါ တွေ ရရှိ ပါတော့တယ်။ AIDS ရောဂါ ဖြစ်နေတယ်လို့ ဘယ်လို သတ်မှတ်လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်ခံ စွမ်းအား စနစ် မှာ ပါဝင်တဲ့ (T cells ) တွေ က သတ်မှတ်ထားတဲ့ Level ထက် နိမ့် ကျ နေရင် (သို့) သွေးစစ် တဲ့အခါမှာ HIV (positive) ဖြစ်နေပြီး ကျန်း မာနေတဲ့ သူတွေမှာ မကူးစက်နိုင် တဲ့ ( ခန္ဓာ ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံ အားစနစ် နိမ့်ကျ မှာသာ ကူးစက်နိုင်တဲ့ ) ကူးစက်ရောဂါ တွေ (opportunistic infections) တွေ ၀င်နေပြီဆိုရင် သတ်မှတ် ပါတယ်။ HIV ပိုးရှိတဲ့သူတွေမှာ ဒီကူးစက် ရောဂါတွေ opportunistic infections တွေကြောင့်(HIV ပိုး ကိုယ်တိုင်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ) မကြာခဏ ဆိုသလို နာမကျန်း ဖြစ်ရ ဖြင်း (သို့) သေဆုံးရခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
HIV ပိုးကြောင့် ခန္ဓာ ကိုယ်မှာ ဘယ်လို ထိခိုက် သလဲ ?
ပုံမှန်အား ဖြင့်တော့ ခန္ဓာ ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအား စနစ် (Immune System ) ကBacterias ၊Virus စတဲ့ရောဂါ ပိုးမွှားတွေ ကိုခန္ဓာ ကိုယ်အတွင်း မ၀င်ရောက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ကို လက်နက်တွေရဲ့ ရန်ကနေ ကာကွယ်ပေး တဲ့ သံချပ်ကာ အိင်္ကျီနဲ့ တူပါတယ်။ HIV ပိုး ကိုယ်ထဲကို ၀င်သွားပြီဆိုတာ နဲ့ ဒီပိုးက အကာအကွယ် အီင်္ကျီကို အပေါက်တွေ ဖောက်ပြစ်တော့တာပါပဲ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒီအကာကွယ် အီင်္ကျီက ဘာမှမကာကွယ်နိုင်တော့လောက်အောင် ဆိုးရွား ချိနဲ့ သွားတော့တာပါပဲ။ အဲဒီလို မျိုး HIV ပိုးကြောင့် ခန္ဓာ ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်း အားစနစ်က ကျဆင်း ချိနဲ့သွား တဲ့အခါ မှာ အဲဒီ လိုကို AIDS ရှိနေပြီ လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် HIV positive ဖြစ်နေပါလျက် ကုသမှုမခံ ယူဘူးဆိုရင် (အကြမ်းဖြင်း အားဖြင့်) ၈ နှစ်ကနေ ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ HIV ကနေ AIDS ရောဂါသည် ဘ၀ကိုရောက်ရှိ သွားပါတယ်။
HIV ရောဂါပိုး ဘယ်လို ကူးစက်လဲ ?
HIV ရောဂါပိုးဟာ ခန္ဓာကိုယ် ကနေ ထွက်တဲ့ အရည်တွေ(သွေး ၊ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရဲ့အင်္ဂါ ဇာတ်ကနေထွက်တဲ့ အရည်တွေ ၊မိခင် နို့ရည် တွေ) ကနေ တဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးမှ တစ်ဦးကို HIV ပိုး ကူးစက် ဖို့ဆိုရင် HIV ပိုးပါဝင်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် က နေ ထွက်တဲ့ အရည် တွေ ကခြား တစ်ဦးရဲ့ သွေးထဲကို ရောက်ရှိ သွား မှာ သာ ကူးစက် သွားနိုင်ပါတယ်။
အများ အားဖြင့် HIVပိုး ကူးစက်ပုံ နည်းလမ်း တွေကတော့ -
၁။ အကာအကွယ် ပစ္စည်း ( ကွန်ဒုံး) အသုံးမပြုဘဲ လိင်တူလိင်ကွဲ ဆက်ဆံ ခြင်း (ပါး စပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံ ခြင်းကြောင့်လဲ ကူးစက် နိုင်ပါတယ်)
၂။ ဆေးထိုး အပ်ကိုမျှ၍ အသုံးပြုခြင်း
၃။ မိခင်မှ ကလေးသို့ ကူးစက်ခြင်း (ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေစဉ် ၊ မွေးဖွားစဉ် မှာ သာ ကူးစက်နိုင်ရုံ သာမက နို့တိုက်ခြင်း ကနေလဲ ကူးနိုင်ပါတယ်။ )
Posted by စိုးထက် - Soe Htet !6comments
Posted by Dr. Win Thein2comments
Labels: Chest pain, Heart, Heart disease, Ischemic Heart Disease
အပူပိုင်းဒေသဆိုသည်မှာ အီကွေတာနဲ့ဆိုင်သော ဒေသများကို ဆိုလိုပြီး အီကွေတာ ဒေသအပါအ၀င် မြောက်ဘက်တွင် မြောက်လတ္တိကျု ၂၃.၅ ဒီဂရီအတွင်းနှင့် တောင်ဘက်တွင် တောင်လတ္တိကျု ၂၃.၅ ဒီကရီအတွင်းရှိ ဒေသများသည် အပူပိုင်း ဒေသထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။
အပူပိုင်းဒေသတွင် ပါဝင်သော နိုင်ငံများကို မြေပုံမှတဆင့် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ထိုဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အပူချိန်၊ ရာသီဥတုအမျိုးအစား၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ နေထိုင်ကျက်စားသော ပိုးမွှားများ၊ အစားအသောက် ၊ လူနေမှုစနစ် စသည်တို့အ ပေါ်မူတည်ပြီး ဖြစ်ပွားတတ်သော ရောဂါများရှိလေရာ ယင်းတို့ကိုလေ့လာသော ဆေးပညာ ဘာသာရပ်တခု အဖြစ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ၎င်းကို အပူပိုင်းဒေသဆိုင်ရာ ဆေးပညာ ဘာသာရပ်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်။
၁။ အစားအသောက် ၊ ရေ၊ မြေကြီး တို့မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ နှင့် တကိုယ်ရေ မသန့်ရှင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားရသော ရောဂါများ
ဥပမာ။ ။ ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါအမျိုးမျိုး၊ ကပ်ပါးကောင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ရောဂါအမျိုးမျိုး၊ အသည်းယောင်အသားဝါ အေ ပိုးကြောင့်ဖြစ်သော အသည်းရောင်ရောဂါ ၊ သံကောင် တုတ်ကောင် နှင့် ယင်းတို့နှင့်စပ်ဆိုင်သော ကျန်းမာရေးပြသနာများ ၊အစားအသောက် မဆင်ခြင်မှုကြောင့် ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများပါဝင်ပေသည်။
၂။ ခြင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ရောဂါအမျိုးမျိုး
ခြင်ကြောင့်ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများတွင် လူအများဆုံးသိထားသော ရောဂါမှာ ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပြီး အခြားသောရောဂါများဖြစ်သည့် ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ (filariasis and enlephatiasis)၊ ဦးဏှောက် အမြှေးရောင်ရောဂါအမျိုးမျိုး (Japanese B encephalitis, west nine virus encephalitis) စသည်တို့ပါဝင်ပါတယ်။
၃။ ခြင်မဟုတ်သောအကောင်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ရောဂါအမျိုးမျိုး
ခြင်မဟုတ်သော ပိုးမွှားများဖြစ်သည့် မွှား (tick)၊ ကမျဉ်းကောင် (mite) ၊ ယင်ကောင်အမျိုးမျိုး (fly) ၊ သန်း အပါအ၀ါအ၀င် အခြားသော သွေးစုပ်တတ်သော အကောင်ငယ်ကလေးများ(flea)၊ စသည်တို့သည်လည်း အချို့သော ရောဂါများကိုဖြစ်ပွားစေခြင်း၊ ယင်းတို့မှ တဆင့် ပိုးမွှားများကို သယ်ဆောင်ကာ လူသားတို့အား ကူးစက်စေခြင်းများရှိသဖြင့် ၎င်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ ကိုလည်းလေ့လာနိုင်ပေသည် ။ ဥပမာအားဖြင့် ဆိုသော် rickettissia ဟုခေါ်သော မွှားကောင်များတွင် သယ်ဆောင်တတ်သော ရောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ်တတ်သော ရောဂါ၊ ကြွက်၏ ကျင်ငယ်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သော leptospirosis ဟုခေါ်သောရောဂါ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မေးခိုင်ရောဂါနှင့် ခွေးရူးရောဂါများကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။
၄။ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ
ထိုအခန်းကဏ္ဌတွင် အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါ အပါအ၀င် ခုခံအားကျဆင်းမှုနှင့် ဆက်နွယ်သော ပြသနာများ ၊အခြားသော လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများပါဝင်ပေသည်။
၅။ အပူပိုင်းဒေသတွင် အဖြစ်များသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြသနာများနှင့် ရောဂါများ
ထိုပြသနာများတွင်တော့ အပူပိုင်းဒေသဆိုင်ရာ ရောဂါများ မဟုတ်သည့်တိုင် အဖြစ်များသော ရောဂါများဖြစ်လေရာ တီဘီရောဂါ၊ အသည်းရောင် အသားဝါရောဂါအမျိုးမျိုး၊ အဆုတ်ပွရောဂါနှင့် အခြားသော အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖစ်သောရောဂါများ၊ အပူပိုင်းဒေသတွင် အဖြစ်များသော သွေးနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများ၊ မြွေကိုက်ခံရခြင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ အပူပိုင်းဒေသတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ ရောဂါများ ၊ သွေးဆိပ်တက်ခြင်းနှင့် အခြားသောလက္ခဏာများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရောဂါမဖြစ်ပေါ်မှီ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာနေနိုင်သည့် meloidosis ဟုခေါ်သော ရောဂါ စသည်ဖြင့်ပါဝင်ပေသည်။
ယခုခေတ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလာခြင်းသည် ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ ရောဂါပိုးမွှားများသည်လည်း တနေရာမှတနေရာသို့ ကူးသန်းရောက်ရှိပေရာ ခရီးသွားခြင်းမှ တဆင့်ဖြစ်ပွားတတ်သော ရောဂါများ ကို လည်းလေ့လာနိုင်ပေသည်။
အပူပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများသည် အပူပိုင်းဒေသ တခုတည်းတွင်သာ ဖြစ်ပွားတတ်သော ရောဂါများ မဟုတ်ဘဲ အခြားသော ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိဒေသများသို့ပါ ကူးစက်ပြန့် ပွားလျှက်ရှိသော ရောဂါများဖြစ်သည်။ ယခုအခါ အပူပိုင်းဒေသဆိုင်ရာ ဆေးပညာဟု ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် သင်ကြားပေး နေသော်လည်း အချို့သော အပူပိုင်းဒေသရှိ နိုင်ငံများတွင် ထိုရောဂါများကို သတိထားမှုနည်းခြင်း၊ ရောဂါ စစ်ဆေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများရှိမှုကြောင့် ရောဂါများကို ရင်ဆိုင်နေရသည့် တိုင်အောင် ရောဂါအမည်ဖော်နိုင်မှု၊ တိကျသော ကုသမှုရနိုင်မှုများ အတွက် အခက်အခဲများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
2. Mahidol. Courses in tropical clinical medicine. Bangkok school of Tropical medicine. Faculty of tropical Medicine, Mahidol University.
လောကအလှ၊ ကျန်းမာရေး၊ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်
Posted by မွန်းသက်ပန် (ဆေး-၁)2comments
Labels: Education, Tropical disease
အရေးပေါ် သားဆက် ခြားနည်းများ
အရေးပေါ်သားဆက် ခြားနည်းများ တွင် သောက် ဆေး ကို အတူနေပြီး ( ၇၂ ) နာရီ အတွင်း အသုံး ပြု နိုင် ပါ သည် ။
Postinor သို့ မ ဟုတ်Ecee-2 ကို အသုံး ပြု နိုင် ပါ သည် ။ ထို ဆေး တို့တွင် levonogestrol ( 0.75 mg ) ပါဝင် ပါ သည် ။
တခါ သောက် လျှင် ၂ လုံး တစ် တွဲ သောက် ရပါ သည် ။ ထို ဆေး များ လွယ် တကူ မ ရ ပါ က ရိုးရိုး လက်ညိုး ထိုး တား ဆေး ကဒ်
မှအညိုရောင်ဆေး လုံး များ ကို ၄ လုံး ၄ လုံး စီ ၁၂ နာရီ ခြား ပြီး သောက် ရင် လဲ ရ ပါ သည် ။
ထိုဆေး များ သောက် ပြီး ၂ နာ ရီ အတွင်း ဆေး များ အန် ပါ က ချက် ချင်း ဆေး ထပ် သောက် ဖို့ လို အပ် ပါ သည် ။
အရေးပေါ် သားဆက် ခြားနည်း မှ ပစ္စည်း ထည့် နည်း တွင် အတူ နေ ပြီး ( ၅ ) ရက် အတွင်း ထည့် နိုင် ပါ သည်။
ပစ္စည်း ထည့် ပြီး မှ မတော် တဆ ကိုယ် ၀န် ရ သွား ပါ က ... သိ သိ ချင်း ပြန် ထုတ် ပစ်ရ ပါ မည် ။
Posted by Www.KoGyiThu.BlogSpot.Com4comments
Posted by Www.KoGyiThu.BlogSpot.Com 1 comments
သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ (၂) အမှတ် (၃) မှာဖော်ပြခဲ့ဖူးတဲ့ ကျမမွန်းသက်ပန် ရဲ့ ဆောင်းပါးတခုကို ပြန်တင်ပေးထားချင်ပါတယ်။ ကိုလေး (ဆေး-၁) ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အပူပိုင်းဒေသရှိ အချို့သော အပင်များနှင့် အသီးအနှံများကိုစားသုံးခြင်းသည် လူတို့အား စိတ်ညစ်ညူးစေသော အဆိပ်သင့်ခြင်းမှစ၍ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် အဆိပ်သင့်ခြင်းတို့အထိဖြစ်စေနိုင်ပေသည်။ အစားမတော် တလုတ် အသွားမတော်တလှမ်းဆိုသော စကားနှင့်အညီ ထိုအသီးအနှံများသည် ယျေဘူယျအားဖြင့် လူသားတို့အား ပြင်းထန်စွာဆိုးကျိုး မဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း အခန့်မသင့်သော အခါတွင်ကား ယင်းတို့၏ဆိုးကျုိုးများမှာ လူနေမှုဘ၀ကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေပါသည်။
၎င်းတို့ထဲမှ အသီးတခုမှာ စားသုံးပြီးနာရီအနည်းငယ်အတွင်း အနံ့ဆိုးရွားစွာ ထွက်စေနိုင်သော်လည်း အချို့သောသူများ စွဲစွဲမြဲမြဲ နှစ်ချိုက်နေဆဲဖြစ်သော ဒညင်းသီးပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဒညင်းသီးကို သိပ္ပံနည်းကျ ခွဲခြားကြည့်မည်ဆိုပါလျှင် အောက်ပါ အတိုင်းခွဲခြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒညင်းပင်များကို အရှေ့တောင် အာရှတွင်အများဆုံးတွေ့ရပြီး ဒညင်းသီးသည် အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းများတွင် ခေတ်စားသော ရိုးရာ အစားအစာများထဲမှ တခု အဖြစ်ပါဝင်လျှက်ရှိသည်။ ဒညင်းသီးးကို ပြုတ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ၀က်သားသို့မဟုတ် ကြက်သားများနှင့် တွဲဖက်ပြီး ချက်၍သော်လည်းကောင်း ၊ ခပ်စပ်စပ်ထောင်းထုထားသောဒညင်းသီးကို အုန်းနို့ နှင့် ရောကာ အချိုပွဲ အဖြစ်သော်လည်းကောင်း မီးဖုတ်ပြီး သို့မဟုတ် ဆားစိမ်ပြီးနောက် အတို့အမြှုတ်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း အမျိုးမျိုး စားသုံးတတ်ကြပေသည်။ ဒညင်းသီးကို မိုးဦးကျစ အချိန်တွင် စပြီးတွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း စက်တင်ဘာနှင့် ဖေဖော်ဝါရီ လကြားတွင် ပေါပေါများများတွေ့ရှိနိုင်ပေရာ အဆိပ်သင့်မှုနှုန်း မှာလည်း ထိုလများတွင် များပြား နေတတ်ပေသည်။
ဒညင်းသီးတွင် ပါဝင်သော 1-2% djenkolic acid သည့် ပုံမှန်အားဖြင့်လူသားတို့အား အနည်းငယ်မျှသာ အဆိပ်သင့်စေပေသည်။ djenkolic acid ဆိုသည်မှာ sulphur ပါသော amino acid တမျိုးဖြစ်ပြီး cystine ဟုခေါ်သော amino acid နှင့် အနည်းငယ်ဆင်တူပေသည်။
ဒညင်းသီးကို စားသုံးပြီးနာရီအနည်းငယ်အတွင်းတွင်ပင် ခံတွင်းနံ့၊ ဆီးအပါအ၀င် အခြား သော ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သော အရည်များထဲ၌် ယင်းမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြစ်သော sulfuric acid ၏ အာနိသင်များကြောင့် ဆိုးရွားသော အနံ့တမျိုးကို ရရှိနိုင်ပေသည်။ ယင်းအနံ့သည် အဆိပ်သင့်ခြင်းကြောင့် မဟုတ်သေးသော်လည်း အတိုင်းအတာတခုအထိ ပတ်ဝန်းကျင်အား ညစ်ညမ်းစေခြင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးတွင် အဟန့်အတား ဖြစ်စေခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပေသည်။ djenkolic acid သည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် ငrystal တမျိုးဖြစ်ပေါ် စေပြီး ယင်း crystal သည် ကျောက်ကပ်ပြွန်များထဲတွင် စုစည်းနေတတ်ကာ ပြွန်များကို ပိတ်စေနိုင်ပြီး ကျောက်ကပ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထိခိုက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒညင်းသီးစားသုံးသော သူများထဲတွင် အခန့်မသင့်ပဲ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်သူများမှာ djenkolic acid ၏ crystal (ပုံဆောင်ခဲ)များကြောင့် သို့မဟုတ် dejnkolic acid တွင်ပါဝင်သော အဆိပ်တမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် ဒညင်းသီးစားသုံးပြီး အခန့်မသင့်သောအခါ တွင် မူးခြင်း၊ အန်ခြင်းမှ စ၍ ၀မ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းနှင့် ဆီးစပ်တွင် အောင့်တတ်ခြင်း၊ ဆီးထဲတွင် သွေးပါခြင်း၊ ဆီးအောင့်ခြင်း၊ ဆီးနည်းသွားခြင်း၊ ဆီးတွင် ပရိုတိန်းများပါခြင်း၊ သွေးပေါင်တက်ခြင်း၊ နှင့် အချို့သော သူများတွင် ရုတ်တရက် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းလက္ခဏာများအထိ တွေ့နိုင်ပေသည်။ ဒညင်းသီးကြောင့်ဖြစ်တတ်သော ဆိုးရွားစွာ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းမှာ အတော်အတန်ရှားပါးလှပြီး ၎င်း၏ဖြစ်စဉ်မှာ uric acid ကြောင့်ဖြစ်တတ်သော ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုနှင့် အတော်ကိုဆင်တူပေသည်။
အချို့သောသူများတွင် ကိုယ်အပူချိန်အနည်းငယ်တက်ခြင်း၊ သွေးဖြူဥများခြင်းတို့ကိုပါ ပူးတွဲ တွေ့နိုင်ပါသည်။
ဆီးစစ်ကြည့်မည်ဆိုပါ က ဆီးထဲတွင် ပရိုတိန်း၊ ဆဲလ်များနှင့် သွေးနီဥများ အပ်နှင့်တူသောပုံဆောင်ခဲ crystal များကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိပ်သင့်သူ၏ ကျောက်ကပ်ကို တီဗွီဓတ်မှန်ရိုက်ကြည့်မည်ဆိုပါ လျှင် ကျောက်ကပ် အနည်းငယ်ကြီးနေသော လက္ခဏာများကိုတွေ့နိုင်ပေသည်။
ဝေဒနာပြင်းထန်သူများ၏ သွေးကိုစစ်ဆေးကြည့်မည်ဆိုပါလျှင် ကျောက်ကပ် မကောင်းသော လက္ခဏာများဖြစ်သည့် creatinine ပမာဏတက်နေတတ်သည်ကို တွေ့နိုင်ပေသည်။
လူတဦးတစ်ယောက်ချင်းစီပေါ်မူတည်ပြီး အဆိပ်သင့်မှု ပမာဏမှာ ကွာခြားနိုင်ပေသည်။ များသောအားဖြင့် ဒညင်းသီးအလုံး ၂၀ နှင့်အထက် စားသုံးပါလျှင် အဆိပ်သင့်နိုင်သောအလား အလာများစွာရှိပေသည်။ သို့သော်လည်း အချို့သောသူများတွင် ဒညင်းသီးတလုံးစားရုံမျှဖြင့် အဆိပ်သင့်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပေသည်။
အဆိပ်သင့်သောသူအများစုမှာ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာနိုင်သော်လည်း ကျောက်ကပ် ပျက်စီးနိုင်သည့် လက္ခဏာရှိသူများအား ဆေးရုံတွင်းကုသမှုပေးရန် လိုအပ်ပေသည်။ ကုသနည်းမှာရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာစေရန် လိုအပ်သောဆေးများပေးခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ ဆီး၏ PH တွင် အက်ဆစ်များနေမှုကို လျော့ကျစေရန် NaHCO3 ဟုခေါ်သော ဆေးတမျိုး ကိုသွေးပြန်ကြောထဲသို့ ထိုးသွင်းပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆီးဆေးများ ကို လူတဦးစီအလိုက် ချင့်ချိန်၍ပေးခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း ကုသရပေသည်။ ရုတ်တရက် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးသော လက္ခဏာရှိသူများအား အနီးကပ် အထူးကြပ်မတ်ကုသခြင်းများကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ထိုသို့ကုသခြင်းများဖြင့် မသက်သာနိုင်သော ဝေဒနာရှင်များအား ဆီးလမ်းကြောင်း အတွင်းသို့ ပြွန်ချောင်း ထည့်သွင်းကုသခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။
ဒညင်းသီးသည် အစိမ်းစားသုံးခြင်း ၊ ဒညင်းသီးစားသုံးသော ရက်များတွင် ရေအနည်းငယ်သာ သောက်သုံးဖြစ်ခြင်းများသည် အဆိပ်သင့်မှုကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသခြင့် ယင်းအပြုအမူများ ကိုသတိပြူရှောင်ကျဉ်သင့်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် ဒညင်းသီးကြောင့် ဖြစ်သော အဆိပ်သင့်ရောဂါ djenkolism သည်အချိန်မှီကုသနိုင်လျှင် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ပျောက်ကင်းနိုင်သည့် ရောဂါဖြစ်သော်လည်း ခံစားရခက်သော ရောဂါတမျိုးဖြစ်လေရာ ငွေကုန် လူပန်းမဖြစ်ရလေအောင် အဆိုပါ အသီးအား ချင့်ချိန်စားသုံးသင့်ပေသည်။
2. Viroj Wiwanitkit. Renal failure due to djenkolism: an appraisal of previously reported Thai cases .Clin Exp Nephrol (2005) 9:343.
3. Wong JS et al. Acute Anuric Renal Failure Following Jering Bean Ingestion. ASIAN JOURNAL OF SURGERY VOL 30. NO 1. JANUARY 2007